Kwenzeka ntoni kwiTelefonica? | Ezezimali
Ewe, esinye sezihloko ze-bearish ezikhoyo okwangoku zihambelana neTelefonica. Baye babona ukuba kwiinyanga ezimbalwa ixabiso lezabelo zabo liye lasuka phantse kwi-8 ye-euro ngesabelo ngasinye ukuya kwixabiso elingaphantsi kwe-5 euro. Ngamanye amagama, iye yehlelwa kukuhla kwexabiso elingaphezulu kwama-30% ukuya kuphelelwa lithemba kwabanini zabelo. Ngaphantsi kwe-downtrend engazange ikhunjulwe ixesha elide. Apho uxinzelelo lokuthengisa lubekwe ngokucacileyo komthengi. Kwaye okubi kakhulu, ngevolumu yokugaya abasebenzi ekufuneka ihlelwe njengokwamkelekileyo.
Okwangoku, bambalwa abatyali zimali abancinci nabaphakathi abathembela ukugqwesa ngomnxeba kukazwelonke. Kwaye ke bakhetha ezinye iindlela zokwenza ukonga kwabo kunenzuzo kunye neziqinisekiso ezinkulu zempumelelo ekumiseni amaxabiso abo. Umzekelo, kwiinkampani zombane ezisebenzisa amaxabiso okusabela kwimeko yokungazinzi okukhulu kwiimarike zezabelo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba abanye abahlalutyi kwiimarike zezimali banoluvo lokuba izihloko zeteleco zinokunyuka ziye kwi-5 yeuros ngesabelo ngasinye ukusukela ngoku.
Imeko ngokuqinisekileyo akukumemanga ukuba uthathe isikhundla kwixabiso. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuyacetyiswa ukuba ulinde de kube kunikwe imiqondiso yokuqala yokwakheka komhlaba. Ukusuka apho ikwazi ukoyisa kwixesha eliphakathi nelide kwaye inokubonisa imeko enomtsalane yokuhlaziya umdla wabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwelinye icala, inethemba lokuthenga izabelo zayo ngamaxabiso ahlengahlengisiweyo kunalawo aziswe yinkampani ngalo mzuzu. Xa kwiminyaka embalwa edlulileyo wayevavanya amanqanaba kwi-euro ezilishumi ngesabelo ngasinye.
1 I-Telefónica: Ukwanda kwesahlulo
2 Ukusindwa ngamatyala kunye neLatin America
3 Amalungelo ebhola ekhatywayo
4 Izaphulelo kwiimveliso zakho
5 Inkokeli kwi-fiber optics
6 Ngama-68% abathengi
I-Telefónica: Ukwanda kwesahlulo
Nangona kunjalo, icala elilungileyo lale ntsebenzo yiTelefonica kwiimarike ze-equity kukuba isivuno sesabelo sayo ngoku siphezulu kunaphambi kwehlobo. Ngomdla onikezela nge-7% kunye nelinye lamaxabiso aphezulu enza isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain. Kwanangaphambi kwamaxabiso ecandelo lombane, ngokwesiko athe akhokela olu luhlu kumashumi eminyaka adlulileyo. Esi sisiphumo esinqabileyo esivelise ukuwa kwizabelo zenkampani kwaye ngendlela eya kuthi i-savers ibe ngabona baxhamli bayo.
I-Telefónica ihlawula i-0,40 ye-euro njengesahlulo rhoqo ngonyaka ngentlawulo esisigxina, eqinisekisiweyo yokwahlulahlula ibe zizitofu ezibini ze-0,20 ye-euro nganye. Ngale ndlela, umntu otyala imali ayigcinileyo kwi-5,80 ye-euro ngesabelo ngasinye uya kuba nesahlulo esiqikelelwa kwi-4.000 ye-euro minyaka le nasemva kokurhola irhafu. Oko kukuthi, uya kuba nengeniso yenyanga rhoqo ngonyaka kufutshane ne-350 euro. Ewe kunjalo, ngaphezulu ngaphezulu kweemveliso zebhanki kunye neziphumo zengeniso esisigxina ezikhoyo ngoku. Oko kukuthi, ukwenza iphothifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo. Nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike zezabelo.
Ukusindwa ngamatyala kunye neLatin America
Ngayiphi na imeko, iziphumo zenkampani azikhange zibe mbi kwaphela, kodwa kwelinye icala, zifunyenwe kakubi ziimarike zemali. Apho, iTelefonica ivale isiqingatha sokuqala sonyaka ngenzuzo ye-1.787 yezigidi zeerandi, ezimele ukuphuculwa kwe-2,8% xa kuthelekiswa neli xesha linye kunyaka ophelileyo. Kuyacaca ukuba ukusebenza kakuhle kweshishini eSpain, e-United Kingdom naseJamani kuyabuyisa ukuwa okubhaliswe eBrazil naseArgentina. Kodwa eminye imigca yeshishini layo iyaqhubeka nokudala amathandabuzo phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngelixa kwelinye icala, inyani ye-Achilles yesithende somnxeba wesizwe lelona tyala liphezulu lijongwa kakhulu ngabahlalutyi bezemali. Phakathi kwezinye izizathu kuba inokulinganisa iiakhawunti zakho zeshishini kwiikota ezimbalwa ezizayo. Apho esinye sezisombululo onazo esandleni sokunciphisa kukunciphisa isivuno sesahlulo. Kwaye oku kuyinyani yokuba iiarhente zemali azithandi, kuba ukuba bezinokwenzeka, ukunyuka okutsha okutsha kuya kwenziwa ngamaxabiso abo. Ukuya kwinqanaba lokuba le izakuba sesinye sezitshixo kwikamva lenkampani yezoqhakamshelwano kule minyaka izayo. Kwaye okubi kakhulu, ngevolumu yokugaya abasebenzi ekufuneka ihlelwe njengokwamkelekileyo.
Amalungelo ebhola ekhatywayo
UMovistar uvuselele ixesha elizayo amalungelo osasazo eHorecas (iihotele, iivenkile zokutyela kunye neefestile) zomxholo webhola ekhatywayo I-LaLiga Santander, iChampions League kunye ne-Europa League, ukwenzela ukuba abathengi bendawo eneMovistar + babe nakho ukonwabela ezona zinikezelo zemidlalo zipheleleyo kumabonwakude. Kodwa akucaci ukuba lo msebenzi unenzuzo kwiminqweno yomnxeba kwaye kuyathandabuzwa nokuba ikhontrakthi inokuphinda ihlaziywe kwiminyaka ezayo. Yenye yezinto eziza kuchaza ukwehla okubukhali kwamaxabiso kwiiveki ezidlulileyo okanye kwinyanga.
Ewe amalungelo osasazo emidlalo yebhola ekhatywayo angadlala ngokuchasene nomdla wale nkampani idwelisiweyo. Kude kube kufikelela kumanqanaba asezantsi kunala acatshulwe ngoku. Ngale ndlela, kukhethwa ukuba ulinde ukuba kwenzeke ntoni nge amalungelo okukhupha kwenzeka ukwenza isigqibo. Nokuba kukuvula izikhundla okanye, ngokuchaseneyo, ukulibala malunga nexabiso ixesha elide kwaye ungabinangxaki engaphezulu kwesinye ngexabiso lezabelo zalo. Nangona baninzi abalamli bezezimali abacinga ukuba amaxabiso abo atshiphu okwangoku. Okanye ubuncinci zilungelelaniswe kakuhle.
Izaphulelo kwiimveliso zakho
Konke oku ngaphandle kokuba abasebenzisi beenkampani zonxibelelwano baya kuxhamla izaphulelo ezongezelelweyo ukuya kuthi ga kwi-150 ye-euro kwii-smartphones eziphezulu, kwaye banokuxhasa ngemali yonke iApple Watch ngeenyanga ezintandathu ze-multiSim yasimahla ngaphandle komdla. Ukongeza, i-BuyBack yinkonzo eya kuthi ngoku inkampani ithenge abathengi izixhobo zabo ezindala xa bethenga entsha. Ingcezu yeendaba ngokuqinisekileyo engakhange inyuke kwiimarike zokulingana. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, bekungathathi hlangothi ngaphakathi komxholo ocacileyo we-bearish kwixesha eliphakathi nelifutshane.
Ngayiphi na imeko, amaxesha amabi otyalo-mali kule minyaka izayo njengesiphumo sokuba ixabiso layo linokuya kumanqanaba asondele kwii-euro ezintlanu ngesabelo ngasinye. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Inkokeli kwi-fiber optics
E-Spain, sele kukho amakhaya angaphezu kwezigidi ezithandathu asebenzisa i-fiber optics yeTelefonica ukufumana iinkonzo zonxibelelwano, ezimele ukonyuka okungaphezulu kwama-24% xa kuthelekiswa nelo xesha linye lonyaka ophelileyo. Oku kukhula kwenani lamakhaya afikelela kwiinkonzo zawo ngenethiwekhi yeTelefonica kubonakala ekusebenzeni kwayo, kuba ukusetyenziswa kwefayibha yomqhubi kuye kwafikelela kwi-27% yetotali kaJuni, ipesenti ephezulu kumanqaku ama-3 kumanani kaJuni ka-2018.
Ngale ndlela, i-Telefónica ineyona network inkulu ye-fiber optic kwikhaya lase-Europe kwaye iyaqhubeka nokwenza isicwangciso sokuhambisa ngenjongo yokufikelela kufibre ebanzi ngo-2025. ummandla wesizwe. Ukusukela nge-70 kaJuni, inani leeYunithi zearhente yokuThengisa izindlu zigqithise kwi-fiber yafikelela kwizigidi ezingama-30, ukonyuka phantse nge-22,2%. Ngokunxulumene noJuni wonyaka ophelileyo, izigidi ezimbini zamakhaya amatsha aneenethiwekhi. Oku kumele ngaphezulu kwe-10 okanye i-2 yetotali yeZiyunithi zearhente yokuThengisa izindlu.
Kumakhaya angaphezu kwezigidi ezithandathu asebenzisa ifayibha yeTelefonica, i-4,15 yezigidi ngabathengi beMovistar, emele i-68% yabo basebenzisa i-BAF, kwaye abanye, i-1,86 yezigidi, ngabathengi abathengisayo abafikelela kwinethiwekhi ngomnye umsebenzisi. Omabini la maqela abathengi aye akhula ngokuzinzileyo kule minyaka idlulileyo. Ukuba siyithelekisa nonyaka ophelileyo, ukusukela ngeyeSilimela 2019, abathengi beMovistar bakhule ngaphezulu kwe-13% ngelixa abathengi abathengisayo befikelela kwi-61%.
UMovistar, uvulindlela ekuhanjisweni kwezixhobo zefayibha, waqala ukuyithengisa ngo-2008 ngesantya sokukhuphela i-30 Mbps. Ukusukela ngalo mhla, uguquko alunakunqandeka, kokubini kwinani lamakhaya agqitywe ngefayibha, nakubathengi abathe banikezela iinkonzo kweso sixhobo nakwisantya senethiwekhi, ukufikelela kwi-600 Mbps symmetric kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Kwenzeka ntoni kwiTelefonica?